Kani waa saldhigga ogaanshaha wireless -ka ee Apple Watch Series 7 | Wararka IPhone
Kani waa saldhigga ogaanshaha wireless -ka ee Apple Watch Series 7
Angel Gonzalez | 16/10/2021 16:43 | Apple Watch, Noticias
Dhowr maalmood ka hor waxaan kuu sheegnay in cutubyadii ugu horreeyay ee Apple Watch Series 7 ay gaareen warbaahinta. Iyo qaar isticmaalayaashakormeerkooda qotada dheer, waxay xaqiiqsadeen ka saarida dekada ogaanshaha jireed ee taageerada ee saacadda cusub ee Apple. Taa bedelkeeda, ogaanshaha lagu sameeyay Dukaamada Apple ee jirka ayaa lagu samayn doonaa a saldhig cusub oo lagu ogaanayo wireless -ka kaas oo ku shaqaynayay inta jeer ee 60.5 GHz.Hadda waxaan arki karnaa sawirradii ugu horreeyay ee saldhiggan, ayaa lagu dusiyay wakaaladda isgaarsiinta Brazil.
Apple waxay u isticmaashaa saldhigga ogaanshaha wireless -ka taageero
Saldhigga cusub ee ogaanshaha ee taxanaha cusub ee Apple Watch 7 waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nooca A2687. Illaa iyo hadda, saacadaha Big Apple waxay qariyeen deked taageero oo ku xirneyd nidaamyada Apple dukaamada jirka. Xiriirintan, waxaad dib u bilaabi kartaa aaladda, dib u rakibi kartaa watchOS, oo farsamo ahaan u falanqeyn kartaa waxa ku dhici kara aaladda.
El Apple Watch Series 7 wuxuu joojiyaa inuu ku daro dekeddan jireed si waddo loogu sameeyo a wareejinta xogta wireless. Wareejintaan waxaa lagu sameeyay saldhigan lacag -la'aanta ah ee aan ka hadlayno. Waxaa kaliya loo adeegsadaa shaqada gudaha wuxuuna ku shaqeeyaa soo noqnoqoshada 60,5 GHz. Saldhiggu wuxuu leeyahay laba qaybood sida aad ka arki karto sawirka madaxa maqaalka. Sawiradaan waa la daadiyey Anatel, shirkad isgaarsiineed oo ku taal Brazil.
Apple waxay dekada ogaanshaha ka saareysaa Apple Watch Series 7
Qaybta hoose waxay xambaarsan tahay saldhigga lacag-qaadista oo ay ku jirto xeedho magnetic iyo deked USB-C oo ku xirnaan doonta nidaamyada tufaaxa weyn. Dhinaca kale, qaybta sare waxay oggolaanaysaa in saacadda la xidho oo la hagaajiyo. Xidhiidhka ka dhexeeya saldhigga birlabka iyo qaybta ayaa oggolaanaya samee dhammaan noocyada kala duwan ee baadhitaannada farsamada jawi ammaan ah iyada oo loo marayo nidaamyada uu abuuray Apple, sida dukaamada jirka ama dhinac saddexaad oo idman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kani waa saldhigga ogaanshaha wireless -ka ee Apple Watch Series 7
Monument Valley 2 waa la cusbooneysiiyay si loogu daro waxyaabo cusub
Charger -ka MagSafe Duo waa mid aan la jaan qaadi karin sida dhaqsaha leh ee loo soo dallaco Apple Watch Series 7